अब कहिले हुन्छ एसईई र ११, १२ को परीक्षा? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/अब कहिले हुन्छ एसईई र ११, १२ को परीक्षा?
काठमाडौं – कोरोना महामारीका कारण विद्यालय शिक्षा परीक्षा तोकिएको एक दिनअघि स्थगित भयो। त्यसपछि लगातर लकडाउन भएपछि परीक्षा कहिले हुने भन्नेमा विद्यार्थी र अभिभावक अन्यौंलमै छन्। एकईईसँगै त्यसपछि नियमित हुने कक्षा ११ र १२ का परीक्षको पनि टुंगो छैन। यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने एसईई कक्षा १२ को परीक्षासँगै गर्न सकिने जनाएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलका अनुसार बोर्डको निर्धारित तालिकाअनुसार आगामी बैशाख ८ गतेबाट कक्षा १२ को परीक्षा हुनेछ। कक्षा ११ को परीक्षा तालिका बैशाख २१ गतेबाट हुने रहेको छ।एसईई परीक्षा बिहान र कक्षा १२ को परीक्षा दिउँसो सञ्‍चालन गर्न सकिने उनले बताए। लकडाउन खुलेपछि तत्कालै परीक्षा प्रक्रियाअघि बढाउने तयारी रहेको समेत उनले बताए।
बाग्लुङ्गका लागि पोखराबाट क्यु लाग्ने ठाउँमा २ महिला र १ पुरुष आएपछि जम्मा ७ यात्रुलाई लिएर स्र्कोपियो बाग्लुङ्गतर्फ हुँइकियो । ७ यात्रु बोकेको त्यही स्कार्पियोमा बेल्जियमबाट नेपाल आएकी एक युवती थिइन् जसमा अहिले कोरोना पोजिटिभ भएको पुष्टि भएको छ ।बाग्लुङ्गकी ती युवतीलाई कोरोनाको संक्रमण देखिएसंगै कसैले उनी आएको जहाजको खोजी गरे त कसैले उनको । रिपोर्टर्स सेभेनले उनलाई पोखराबाट बाग्लुङ्गसम्म पुर्याउने गाडीका चालकको र यात्रुका बारेमा खोजी ग¥यो । उनी कास्कीकै घाचोकका भएको सूचना पाएपछि उनको अवस्था बुभ्ने प्रयास गर्यो ।
ग १ च ६३५३ नं को स्र्कापियो गाडीले संक्रमित ती युवतीलाई बाग्लुङ्ग पुर्याएको पत्ता लाग्यो । गाडीका चालकलाई सम्पर्क गर्ने कोशिश माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं ३ का वडाध्यक्षलाई सम्पर्क गर्यो । संयोगवश वडाध्यक्ष उनकै घरमा पुगेका रहेछन् । चालकसंगको कुराकानीमा उनले आफ्ना बारेमा सबै कुराहरु बताए । करिब ११:३० बजे बिहानको समयमा उनका गाडीमा संक्रमित भनिएकी युवती र १ जना काका पर्ने आएर बाग्लुङ्गको यात्रा तय गरे । गाडीमा ७ जना पुगेपछि हामी क्युबाट छुटेर बाग्लुङ्गका लागि अगाडि बढ्यौ । बिचमा उनी, उनको एकातर्फ उनकी आफ्न्त र अर्कातर्फ अन्य यात्रु रहेको चालकले बताए ।
टुटल–पठाओ लाई ज`हाँ भेट्छौं`, त्यहीँ का र बाही गर्छौं : ट्रा`फिक